TK – Myanmar's English Speaking
မြန်မာ့ English စကားပြော ဝက်ဆိုက်မှ ကြိုဆိုပါတယ် ခင်ဗျာ့
အခုမှ ဒီဝက်ဆိုက်ကိုသိပြီး စလေ့လာသူများ ALL LESSONS ဆိုတဲ့ Page ကိုသွားပြီး Lesson-1 မှ စလေ့လာဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ ခင်ဗျား
မြန်မာ့ English စကားပြော Group မှာ ဆရာ ဒီနေ့အထိ တင်ပေးခဲ့သမျှကို စုပြီး PDF File လေးနဲ့ လုပ်ပေးထားပါတယ်။ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။ အားလုံး အင်္ဂလိပ်စာ တိုးတက်ကြပါစေ။ MyanmarEnglish_GroupDownload	Read More
Categories : News	Posted by TKMyanmarEnglish Comments Off on Myanmar English Group
What, Whatever ! You’ve gotafriend. သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ရှိနေပါပြီး။ သင်ခန်းစာ တစ် နစ် သုံး ကို ကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်မှ ကြည့်ပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ အ ခြေခံမရှိသူများအတွက် တကယ်ကြိုးစားမယ်ဆို သုံးလ အတွင်း နေ့စဉ်သုံးစကား ပြောကိုရမယ်လို့ ကျ နော်ကယုံကြည်သူပါ။ သင်ခန်းစာ တစ်ခုမပိုင်သေးပဲ နောက်သင်ခန်းစာ တစ်ခုကို မ ကျော်သွားဖို့တော့အ ရေးကြီးပါတယ်။ Please use Burmese unicode fonts.	Read More
Categories : Lessons	Posted by TKMyanmarEnglish Lessons	Comments Off on Lesson 41
Clauses/Phrases Monkey see, monkey do! မလုပ်ပါနဲ့ မြန်မာတို့ရဲ့ အတု မြင်အတတ်သင်ကို လုပ်ပါ။ သင်ခန်းစာ တစ် နစ် သုံး ကို ကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်မှ ကြည့်ပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ အ ခြေခံမရှိသူများအတွက် တကယ်ကြိုးစားမယ်ဆို သုံးလ အတွင်း နေ့စဉ်သုံးစကား ပြောကိုရမယ်လို့ ကျ နော်ကယုံကြည်သူပါ။ သင်ခန်းစာ တစ်ခုမပိုင်သေးပဲ နောက်သင်ခန်းစာ တစ်ခုကို မ ကျော်သွားဖို့တော့အ ရေးကြီးပါတယ်။ Please use Burmese unicode fonts.	Read More
Categories : Lessons	Posted by TKMyanmarEnglish Lessons	Comments Off on Lesson 40
Inversion ပြောင်ပြန်ပြောပြီး ထိထိမိမိ ပြောဆိုခြင်း သင်ခန်းစာ တစ်ကနေ နှစ်ဆယ်ထိ လုံးဝ မပိုင်ပဲ ဒီသင်ခန်းစာကို မကြည့်ပါနှဲ့ခင်ဗျာ။ သင်ခန်းစာ နှစ်ဆယ်ထိ ကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်မှ ကြည့်ပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ အ ခြေခံမရှိသူများအတွက် တကယ်ကြိုးစားမယ်ဆို သုံးလ အတွင်း နေ့စဉ်သုံးစကား ပြောကိုရမယ်လို့ ကျ နော်ကယုံကြည်သူပါ။ သင်ခန်းစာ တစ်ခုမပိုင်သေးပဲ နောက်သင်ခန်းစာ တစ်ခုကို မ ကျော်သွားဖို့တော့အ ရေးကြီးပါတယ်။ Please use Burmese unicode fonts.	Read More
Categories : Lessons	Posted by TKMyanmarEnglish Lessons	Comments Off on Lesson 39
Lesson 38. Grammar:9Parts of Speech စကားလုံး ဝေါဟာရ အနက် အဓိပ္ပါယ် ကိုးမျိုး။ သင်ခန်းစာ တစ်ကနေ နှစ်ဆယ်ထိ လုံးဝ မပိုင်ပဲ ဒီသင်ခန်းစာကို မကြည့်ပါနှဲ့ခင်ဗျာ။ သင်ခန်းစာ နှစ်ဆယ်ထိ ကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်မှ ကြည့်ပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ အ ခြေခံမရှိသူများအတွက် တကယ်ကြိုးစားမယ်ဆို သုံးလ အတွင်း နေ့စဉ်သုံးစကား ပြောကိုရမယ်လို့ ကျ နော်ကယုံကြည်သူပါ။ သင်ခန်းစာ တစ်ခုမပိုင်သေးပဲ နောက်သင်ခန်းစာ တစ်ခုကို မ ကျော်သွားဖို့တော့အ ရေးကြီးပါတယ်။ Please use Burmese unicode fonts.	Read More
Categories : Lessons	Posted by TKMyanmarEnglish Lessons	Comments Off on Lesson 38